Home News Al-shabaab oo sheegatay in ay Dishay Saraakiil keenyaan ah Ka dib Weerar...
Al-shabaab oo sheegatay in ay Dishay Saraakiil keenyaan ah Ka dib Weerar Lagu qaaday Ciidamadeeda
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay in Ciidamo ka tirsan Ciidanka Kenya ay qarax kula beegsadeen duleedka Degmada DHoobleey ee Gobolka Jubada hoose.
Weerarka ayaa ka dhacay degaanka Taabto ee Gobolka Jubada hoose,Al-shabab ayaa sheegatay in qaraxa lala beegsaday Kolonyo ay wateen Ciidanka Kenya.
Qaraxa ayey sheegeen in uu haleelay Gaari Xamuul ahaa oo ka mid ahaa kuwa ay Ciidanka wateen,waxaana la sheegayaa in uu khasaare ka dhashay.
Al-shabab ayaa war ay ka soo saartay ku sheegtay in qaraxaasi uu khasaare u geystay Ciidanka Kenya.
Dowladda Kenya wali kama hadlin qaraxa ay sheegatay A-shabab ee ka dhacay Gobolka Jubada hoose ee Soomaaliya.
Previous articleMW Farmaajo oo qoraal maxkamadeed loogu keeni doono hotelkiisa New York? “A court process server”
Next articleFaahfaahin:-Qarax ka dhacay Dhoobleey